किन सहि किचनको नल फरक पार्छ
घर / ब्लग / किन सहि किचनको नल फरक पार्छ
2020 / 11 / 09 वर्गीकरणब्लग 4136 0
तपाईले हराउनु भएको कुरा पहिचान गर्न गार्हो हुन्छ जब सम्म तपाई एक उन्नत किचेन faucets को लागी बदल्नु हुन्छ। त्यहाँ धेरै प्रकारका छन्, टच एक्टिभेसनबाट मोशन सेन्सर faucets सम्म। तपाईं धेरै फरक डिजाइनहरूमा नल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईं फेच-स्प्रेयरको प्राथमिकतामा पुल-डाउन वा पुल-आउट स्प्रेयर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
दायाँ ट्यापले तपाईंको प्रक्रिया यति कम कम जटिल बनाउन सक्छ र तपाईंको भान्साको लागि रमाईलोको लागि खर्च गर्ने समय। यदि तपाईंलाई उच्च-गुणको ट्याप चाहिएको छ भने, तपाईंले जहिले पनि किनमेल गर्नुभन्दा पहिले मूल्याations्कनहरू पढ्नुपर्दछ। उत्पादनहरु संग आफ्नो अनुभव को बारे मा ग्राहकहरु दुबै खराब र राम्रो खुला हुन सक्छ।
तपाईं तेल-पीसिएको काँसाको भान्साको नलको लागि किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ कि केहि सय डलर मूल्य वा केवल एक उपयुक्त विकल्पको लागि खोजी गर्दै, समीक्षाले सहयोग गर्न सक्दछ। यो तपाईको लागि सहि ट्याप तल स्लिम गर्न को लागी एक तरीका हो। किनकि सबैजना भान्साको ट्यापमा पेसेवर हुँदैन, तपाईले खोज्न चाहानु भएको सामानहरू समेट्नु यो पहिलो-दर हो। यस बारे यहाँ वा अधिक जानकारी पढ्नुहोस् म्याट कालो तल भान्साको नल पुल.
क्षमताहरू तपाइँ तपाइँको नयाँ भान्साको नलमा खोज्न चाहानुहुन्छ
पूर्ण पीतल निर्माण
यो सामान्य रूपमा अब कुनै समस्या छैन जब सम्म तपाईं वास्तविक रूपमा उचित मूल्य ट्याप छान्नुहुन्न। अधिकांश नलहरू पीतलबाट बनेका हुन्छन् यस तथ्यको कारण तिनीहरू अब पानीसँग सम्पर्कमा हुँदा बिभिन्न धातुहरू जस्तै कोर्रोड गर्दैनन्। यसले तपाइँको नललाई लामो समयसम्म जारी राख्दछ र तपाइँ खर्च नगदको लागि तपाइँ थप प्राप्त गर्नुहुन्छ। डेल्टा, मोन, कोहलर, डन्जे जस्ता ब्रान्डहरू र उनी वा उनको ट्यापहरूको लागि धेरै अधिक ब्रास प्रयोग गर्नुहोस्।
भर्खरको जेनरेशन अधिकांश अपवादात्मक ट्यापहरूको साथ आउँदछ, तर केही कम्पनीहरू पछाडि ढिलो छन्। तपाईंले निश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईंले युग लिनुभयो जुन तपाईंको लागि राम्रोसँग काम गर्दछ। यदि तपाईं मोशन सेन्सर ट्यापमा निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाईं सजिलै यसलाई आफ्नो भान्छामा फेला पार्न सक्नुहुनेछ। जहाँसम्म, यी उच्च मूल्य हुनसक्दछ, तपाईं पनि टच टेक्नोलोजी सम्झनु पर्छ किनकि यो धेरै समान छ र समान फाइदाहरू बीच प्रस्ताव गर्दछ।
अर्को घटक तपाईंले निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ राम्रो भल्भ टेक्नोलोजी हो। भल्भहरू ती अवयवहरू हुन् जुन भान्साको नलमा अधिकतम रूपमा लगाउन सकिन्छ, र डेल्टा जस्ता केही एजेन्सीहरू प्रविधि प्रदान गर्दछन् जसले तपाईंको भल्भको आयु 5० लाख भन्दा बढीको आयु हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्दछ। अधिक ट्यापले सिरेमिक वाल्भको केही प्रकार प्रयोग गर्दछ, र तपाइँ केवल यो पनी लामो जीवनको लागि डिजाइन गरिएको छ भनि निश्चित गर्नु पर्छ।
समाप्त र नल सीमित जीवनकाल आश्वासन मार्फत खाली हुनुपर्दछ, कुनै पनि अन्य केसमा तपाईं एक अद्भुत ट्याप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंलाई आवश्यक बन्द हुने कारक भनेको यसलाई एक वा दुई बर्षमा बदल्नु हो। नलहरूले न्यूनतम years बर्षको रूपमा बन्द गर्नुपर्दछ, नियमित तपाईंले उनीहरूलाई कसरी दुर्व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर रहन्छ, र तपाईंले आफ्नो ट्यापलाई लगभग धेरै बर्ष परिवर्तन गर्न डराउनु पर्दैन।
कसरी तपाइँको छनौट प्रतिबन्ध गर्न
यदि तपाईं ट्यापको बहु रूपहरू मा हेर्नुभयो भने, तपाईं ईमानदारीसाथ के मन पराउनुहुन्छ र के तपाईं के गर्नुहुन्न भनेर फेला पार्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू सबैले समान गर्दैनन् र अब सबै ट्यापहरू समान निर्माण हुँदैनन्। केही ब्रान्डहरू अरूहरू भन्दा उच्च विचारको रूपमा लिइन्छन्, र यदि तपाईं उत्तम चाहनुहुन्छ भने, तपाईं अझ राम्रो बनाउन केहि पैसा बनाउन इच्छुक हुनुहुनेछ किनभने ती सस्ता छैनन्।
जहाँसम्म, एक एकदमै मूल्यवान नल को लागी सम्झौता अधिक लाभ र एक उत्कृष्ट उत्पादन प्रदान गर्दछ। तपाईंले लगभग यस कष्टकर ड्रपमा चिन्ता लिनु हुँदैन किनभने पहिलो दरको नल गैर ड्रिप टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर गरिन्छ। अर्को कम्पोनेन्ट तपाईले पाउनु भयो जब तपाई सही नलको लागि अलि बढी भुक्तान गर्नुहुन्छ अतिरिक्त क्षमताहरू। यसले तपाईंले चयन गर्नुभएको ट्यापमा निर्भरता धेरै फरक चीजहरू समावेश गर्न सक्दछ।
सकारात्मक बनाउनुहोस् तपाईले सबैभन्दा उत्तम नल छनौट गर्नुहुन्न, जे होस् उत्कृष्ट पनि देखिन्छ र राम्रोसँग काम गर्दछ। तपाईं पहिले यो परीक्षण गर्न सक्नुहुन्न, तपाईं एक भयानक छनौट गर्नुभयो भने यो राम्रो संग हुक छ सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईं पहिले केही आलोचनाहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ भने, तपाईं नयाँ नयाँ भान्छा नलमा गलत चयन गर्न कम सम्भव हुनुहुन्छ।
अघिल्लो :: Th चीजहरू जुन एक महान रसोईको नल बनाउँदछ अर्को: भान्साको नल कसरी बदल्ने?
2020 / 11 / 09 1619
Th चीजहरू जुन एक महान रसोईको नल बनाउँदछ
के गर्ने जब भान्छाको नल खरीद गर्ने
2020 / 11 / 02 2211
२०२० युएस बाथरूम रुझान रिपोर्ट: स्मार्ट शौचालय, सेन्सर नलिका, र कस्टम ब्याट ...
2020 / 11 / 02 1848
नासा द्वारा लिइएको, यी तीन शौचालयहरु चंद्रमा जाँदैछन्!
के तपाईलाई थाहा छ कि २०२० मा सबै भन्दा लोकप्रिय सुनिएको बाथरूम कसरी सजाउने?